Blue Mark ကို ကိုယ်တိုင်လျှောက်ကြည့်ချင်သူများအတွက် | Online Service Center Myanmar -->
မကြာခဏ အကူအညီလာလာတောင်းတတ်ကြလို့ပါ၊ ကိုယ့်ရဲ့ Account နဲ့၊ ကိုယ့်ရဲ့ Page က Blue Mark ရနိုင်တဲ့စာရင်းမှာပါတယ်၊ ရသင့်တယ်လို့ယူဆရင် ပိုက်ဆံတပြားတကျပ်မှမကုန်ကြတာမို့ လျှောက်ကြည့်ကြပါ။
တခုတော့ပြောချင်ပါတယ် အဲ့ဒါကတော့ Facebook က သတ်မှတ်ထားတဲ့စာရင်းထဲမှာမပါဝင်ဘူးဆိုရင်တော့ အားအားယားယားဝင်မလျှောက်ပါနဲ့ ကိုယ့်အကောင့်၊ ကိုယ့် Page က Blue mark ရနိုင်တာမျိုးမဟုတ်ပဲ ခဏခဏ ဝင်လျှောက်လွန်းရင် ရာသက်ပန်လျှောက်ခွင့်အပိတ်ခံရနိုင်ပါတယ်။ Blue Mark ရနိုင်တဲ့စာရင်းမှာပါဝင်တဲ့ Page တွေ အကောင့်တွေ အနေနဲ့ကတော့ ယခင်ကတော့ လျှောက်ဖူးတယ်၊ ဒါပေမယ့်အငြင်းခံလိုက်ရတယ်မရဘူးဆိုရင် ရက် ( ၃၀ ) ကျော်တိုင်းမှာ ပြန်လျှောက်ကြည့်ပါ၊ ကိုယ့်အကောင့်၊ ကိုယ့် Page မှာ လိုအပ်ချက်လေးရှိနေသေးလို့မရသေးတာပါ၊ သတ်မှတ်ချက်တွေပြည့်မှီတာနဲ့ ရပါလိမ့်မယ်။ WiKi Page ရှိရမယ်၊ ကိုယ့်အကြောင်း သတင်းမီဒီယာမှာဖော်ပြထားတာတွေရှိရမယ်၊ အင်တာဗျူးထားတာမျိုးတွေရှိရမယ်၊ ဆိုပြီး အတိအကျသတ်မှတ်ပေးမထားပါဘူး၊ ဘာမှမရှိလည်း သတ်မှတ်ချက်တွေပြည့်မှီရင်ရပါတယ်။
Blue Mark လျှောက်ဖို့အတွက် ဘာတွေလိုအပ်လည်းဆိုရင်...
နံပါတ်( ၁ ) - ကိုယ့် Account, ကိုယ့် Page, က Public figure, Celebrity, or Global brand it represents. ဖြစ်နေဖို့လိုပါတယ်၊ အဲ့လိုမှ မဟုတ်ရင် လျှောက်ဖို့စိတ်မကူးပါနဲ့ လျှောက်လည်း ရမှာမဟုတ်လို့ပါ။
နံပါတ်( ၂ ) - User Account, User Page အတွက်ဆို ID Card လိုအပ်ပြီး၊ Business Page အတွက်ဆို လုပ်ငန်းလိုင်စင်လိုမျိုးလိုအပ်ပါတယ်။
နံပါတ်( ၃ ) - လျှောက်ထားသူရဲ့ Account ရဲ့ Security ပိုင်းအတွက် Two-Factor( Login Approved Code ) ကို On ထားဖို့လိုပါတယ်။
အဲ့ဒီ ( ၃ ) ချက်ပြည့်စုံပြီဆိုရင် လျှောက်ကြည့်လို့ရပါတယ်။
Profile( User Account ) အတွက်လျှောက်နည်း -
1. Verification type မှာ Profile ကိုရွေးပါ။
2. Provide your Facebook Profile's link မှာ ကိုယ့်အကောင့် Profile link ကိုထည့်ပါ။
3. Selectacategory for the Page or Profile မှာ ကိုယ့် Account နဲ့ သက်ဆိုင်တဲ့ Category ကိုရွေးပေးပါ။
4. Which Country is this entity from? မှာ Myanmar လို့ရေးပေးပါ။
5. Please attachaphoto of your ID မှာ လူအတွက်ဆို ID Card( မှတ်ပုံတင်၊ ပတ်စပို့စ်၊ ယာဉ်မောင်းလိုင်စင်၊ အသင်းအဖွဲ့ဝင်ကတ်၊ တွေထဲကတခုခု ) ထည့်ပေးပါ။
6. Please share why this Facebook Page or Profile should be verified မှာ ကိုယ်ကဘယ်သူဘယ်ဝါပါ၊ ဘာလုပ်ပါတယ်၊ ဘာကြောင့် Blue Mark ကို ရချင်တာပါရေးပေးပါ။
7. List other social media presence accounts (optional) မှာကတော့ ကိုယ့်မှာ IG, Twitter, TikTok, ဘာညာတွေရှိရင်ထည့်( ဘာမှမထည့်လည်းရတယ် )။
8. Additional comments (optional) မှာ မှတ်ချက်တခုခုထပ်ရေးချင်ရင်ရေး( ဘာမှ မရေးလည်းရတယ် )။
9. ပြီးပြီဆို Send ကို နှိပ်ပို့ပေးလိုက်ရင်ရပြီ။
ဒီလောက်လွယ်ကူနေတဲ့အရာကို ဘာလို့သူများကိုလျှောက်ခိုင်းနေဉီးမှာလဲ? ဘာလို့ ပိုက်ဆံပေးပြီးလျှောက်ခိုင်းနေမှာလဲ?
Page အတွက်လျှောက်နည်း -
1. Verification type မှာ Page ကိုရွေးပါ။
2. Select Page to verify မှာ ကိုယ် လျှောက်မည့် Page ကိုရွေးပေးပါ။
3. Selectacategory for the Page or Profile မှာ ကိုယ့် Page နဲ့ သက်ဆိုင်တဲ့ Category ကိုရွေးပေးပါ။
5. Please attachaphoto of your ID မှာ လူအတွက်ဆို ID Card ထည့်ပေးပါ၊ လုပ်ငန်းအတွက်ဆို လုပ်ငန်းလိုင်စင်ထည့်ပေးပါ။
6. Please share why this Facebook Page or Profile should be verified မှာ ဒီ Page က ဘာ Page ပါ ဘာကြောင့် Blue Mark ကို ရချင်တာပါရေးပေးပါ။
ဘယ်ကဝင်လျှောက်ရမှာလဲ ဆိုရင် ဒီကဝင်လျှောက်ပါ => https://www.facebook.com/help/contact/342509036134712?helpref=https//www.facebook.com/aungkyawsoe.sb
Blue Mark လျှောက်တာ ပိုက်ဆံပေးရလား၊ ပိုက်ဆံပေးပြီးဝယ်လို့ရလားဆိုရင် "It's not possible to purchaseaverified badge" လို့ရေးပေးထားပါတယ်၊ အမြဲတမ်းအခမဲ့ပါ၊ မည်သူမဆိုလျှောက်ထားလို့ရပါတယ်၊ သတ်မှတ်ချက်ပြည့်မှီတဲ့သူဖြစ်ဖို့ပဲလိုပါတယ်၊ ပိုက်ဆံနဲ့ဝယ်လို့မရသလို တပြားတကျပ်မှလည်းပေးစရာမလိုပါ။
အဲ့ဒီအကြောင်းကို ဒီ What isaverified Page or profile? ( https://www.facebook.com/help/196050490547892?helpref=https//www.facebook.com/aungkyawsoe.sb ) မှာ ရေးပေးထားပါတယ်။
Blue Mark နဲ့ပတ်သက်ပြီး ပိုမိုပြီး အသေးစိတ်သိရှိလေ့လာလိုပါက How do I requestaverified badge on Facebook? ( https://www.facebook.com/help/1288173394636262?helpref=https//www.facebook.com/aungkyawsoe.sb ) မှာ ဝင်ရောက်လေ့လာနိုင်ပါတယ်။
ကဲ... အခု Blue Mark လျှောက်နည်းအတိုင်းလျှောက်ကြည့်လိုက်လို့ Blue Mark ရသွားပြီဆိုရင် ကျွန်တော့်ကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ်တို့၊ မုန့်လိုက်ကျွေးတာတို့လုပ်ပါ။ ( နောက်တာနော် အတည်ပြောတာမဟုတ်ဘူး၊ ကျေးဇူးမတင်လို့လည်းရပါတယ်၊ မုန့်လိုက်မကျွေးလို့လည်းရပါတယ်။ )
Aung Kyaw Soe ( 24.8.2020 - 11:37 AM )